ပုံပြင်များ - ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သင့်ကိုကောင်းကောင်းနေစေမလဲ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များ၊ အဖြစ်မှန်များသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့, ဇာတ်လမ်းပြောခြင်းသည်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခြင်းမပြုမီကြာမြင့်စွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်ဥရောပ၌မင်းသမီး၏ပုံသည်ဇာတ်လမ်းပြောသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ လူအနည်းငယ်သာစာဖတ်တတ်လာသည့်အချိန်တွင် minstrel ၏ကိန်းဂဏန်းသည်မြို့အားလုံး၏မြို့သားများအားအသိပေးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ minstrels သူတို့ရဲ့သီချင်းတွေကို, အတုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအထူးသဖြင့်အမူအရာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပုံပြင်များကိုပြောပြမြို့များကိုရှောက်သွားလေ၏။ စစ်ပွဲများနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းသူတို့ကအခြားသူများအားပြောပြခဲ့သည် အခြားလူများဖျော်ဖြေရန်။ ဖော်ပြသည့်နည်းဖြင့်သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြခြင်းအားဖြင့်မြို့သူမြို့သားများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့ကဇာတ်ကြောင်းကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေသည့်သေးငယ်သောတီထွင်မှုများကိုပုန်းရှောင်။ မနေခဲ့ကြပါ။
ကောင်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကအမြဲတမ်းတကယ့်ကိုအမြဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်စာကြောင်းများနှင့်စာပိုဒ်များအကြားတွင်ဝှက်ထားသောအချို့သောအရာ၊ ပုံပြင်၏ဗဟိုဝင်ရိုးဖြစ်လာသည့်စစ်မှန်သောဒြပ်စင်။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်အကောင့်ဖြစ်စေ၊ ဇာတ်ကြောင်းတွင်အမှန်တရား၊ အိပ်မက်မက်သည့်အဖြစ်မှန်များ၊ ပျော်ရွှင်သောအဆုံးသတ်များနှင့်သို့မဟုတ်ဘဝအပေါ်သင်၏ရှုထောင့်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲစေသောမက်ဆေ့ခ်ျများဖြင့်ဖော်ပြသည့်မရေမတွက်နိုင်သောဇာတ်လမ်းများရှိသည်။
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာပုံပြင်များသည်များသောအားဖြင့်တို။ ပျော်စရာကောင်းပြီးကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရီအိုရီရီကိုစာဖတ်သူများမနှစ်သက်သောသူများအတွက်ပင်။ သင်ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုရိုက်လျှင်၊ သငျသညျသံသယတိုတောင်းသောဖတ်ထဲမှာပိတ်မိခံစားရပါလိမ့်မယ်သင်၏ဘဝအမြင်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။
လူတွေအများကြီးလောက်ပုံပြင်တွေများများရှိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာပြောစရာတစ်ခုခုရှိတယ်။ အခြားသူများအတွက်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝအတွေ့အကြုံများကိုလူတိုင်းကပြောပြနိုင်သည်။ သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိမယ်၊ သင့်ကိုဖြည့်စွက်ပေးတဲ့သူကဘယ်နေရာမှာမဆိုစောင့်ဆိုင်းနေနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းကိုယုံကြည်စေတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ။ ဤအခြေအနေများသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ပြီးတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖြန့်ဝေဖို့ရေးတဲ့ပုံပြင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာလက်တွေ့မကျဘူး၊
သို့သော်လူကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်အာဟာရဖြည့်တင်းပေးသည်သာမကဘဝတွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားသော၊ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ဖတ်ရန်လိုအပ်သည် ကျော်လွှားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကတိက ၀ တ်ပြုခြင်း၊ သင်လမ်းကြောင်းတူတူထပ်ခါထပ်ခါဝန်းရံနေသည့်အချိန်တွင်လမ်းရှာရန်သင့်အားကူညီသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကကျွန်တော်တို့ကိုအားနည်းစေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကလုပ်နိုင်တာကိုသိတာထက်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာခံစားဖို့ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိလို့ပဲ။
အစစ်အမှန်ဖြစ်စေ၊ စစ်မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါက၎င်းသည်စစ်မှန်သောအရာတစ်ခုခုရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအရေးကြီးသောဘဝသင်ခန်းစာများပေးလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်၊ ဒီပုံပြင်များကဏ္topicsမှာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၊ ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့အစစ်အမှန်၊ အချို့သောအယောင်ဆောင်ပြီး၊ တချို့ကမြို့ပြဒဏ္asာရီများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့၊
ဒီတစ်ခါလည်းတောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဲဒီဇာတ်လမ်းရေးနေတာကိုး သင်ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေကတခြားသူတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသလို့ပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဘဝကကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ဘယ်တော့မှမသိဘူး။ မည်သည့်ဇာတ်လမ်းကိုမဆိုအခြားသူများအားပြောပြရန်၊ ဖတ်ရန်နှင့်နှစ်သက်ရန်ထိုက်သည်။
အချစ်ဇာတ်လမ်းများကကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာစေသည်၊ ထိုအရာများသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည်၊ ထိုအရာများကိုခံစားရနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စေသည်။
Ted Bundy: နာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့လူသတ်သမားတစ်ယောက်
၁၉၈၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄ တွင် Ted Bundy ကိုဖလော်ရီဒါတွင်ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့တိုင်လူသိများဆဲဖြစ်သည်။
por သူ Manuel လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
ဘင် Carson ၏ဖှယျဇာတ်လမ်း
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့6အနှစ် .
ဤသည်မှာရောင်စုံကောင်လေး Ben Carson ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ငယ်တုန်းကသူ့အစ်ကို၊
စိတ်၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအားဥပမာတစ်ခု - Sam Londe ၏ဖြစ်ရပ်
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စိတ်ထဲတွင်ရှိသည့်အစစ်အမှန်စွမ်းအားကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ သင်သိလိမ့်မယ် ...
အောက်မှာ XL Semanal မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့စာကိုကျွန်မပြန်ထုတ်ခဲ့တယ်။ သူမသည် "The ... ကိုခေါ်ပြိုင်ပွဲ၏အနိုင်ရရှိခဲ့သည်
မသန်စွမ်းသူတစ် ဦး နှင့်ရဲတစ်ယောက်၏ကြင်နာမှုသည်လူမှုကွန်ယက်များသို့သွားသည်
Nathan Sims ကဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွင်သူထိုင်နေသောအချိန်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကသူ့ကိုဓါတ်ပုံရိုက်နေသည်ကိုမသိခဲ့ပါ။
ဒီဟာကဘဝမှာခါးသီးတဲ့ခရီးတစ်ပုံရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ...
လမ်းသွားလမ်းလာတစ် ဦး ကဤအမှိုက်ပုံသည်ထင်သည်။ ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုငါတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူး
por ဒံယလေက လွန်ခဲ့တဲ့ 8 အနှစ် .
ဒီငှက်လေးကိုလူတစ်ယောက်တွေ့လိုက်တယ်။ နောက်လာမည့် ၃၆ ရက် ... မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လိမ့်မည်
လူတစ်ယောက်ကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးကို Imgur မှာတင်ခဲ့တယ်။ ဒီငှက်လေးဘယ်လိုလုပ်လဲ